WAR CUSUB: Ciyaartoyda Arsenal oo doonaya in Alexis Sanchez uu ku biiro Man United ka hor kulanka Sabtiga ee Crystal Palace – Gool FM
Liibaan Fantastic January 17, 2018
(London) 17 Jan 2018 Sida ay baahisay Evening Standard, ciyaartoyda Arsenal ayaa doonaya in Alexis Sanchez uu u dhaqaaqo Man United ka hor kulankooda sabtiga ee Crystal Palace.
Arsenal oo guul daro ay ka soo gaartay axadii Bournemouth ayaa sabtiga garoonkeeda ku marti qaadi doonta kooxda Crystal Palace.
Sanchez ayaa dhibaato ku ah qolka labiska Arsenal, ciyaartoyda kooxda ayaa dhibsaday hab dhaqankiisa, waxaana la sheegay in fowdadiisu ay sabab u ahayd guul daradii kooxda ka soo gaartay Bournemouth axadii la soo dhaafay.
Ciyaarta kadib, tababare Wenger ayaa saxaafada u sheegay in 48-saac gudahood uu ku xalinayo arinta Sanchez, balse ilaa haatan ma jiraan wax isbadal ah oo dhacay, waxaana xaalka sii xumeeyay Man City oo ka baxday tartanka iyo Man United oo ay isku haayaan arinta Mkhitaryan kaas oo ilaa haatan aan heshiis la gaarin Arsenal.
Arsene Wenger ayaa la filayaa inuu wajaho dhibaato cusub oo uga imaanaysa dhanka ciyaartoydiisa haddii Sanchez lagu arko qolka labiska kooxda kulanka sabtiga ee Crystal Palace sida lagu sheegay warbixinta.
Dhamaystirka heshiiska Sanchez ayaa ku xiran ogolaanshaha Mkhitaryan kaas oo ka doonaya Arsenal in kor loo qaado mushaarka haatan uu ka qaato United oo ah 140 kun isbuucii, wuxuuna doonayaa in la gaarsiiyo ilaa 180 kun oo Ginni isbuucii, halka wakiilkiisu uu dalbanayo in la gaarsiiyo mushaarka laacibka 300 kun isbuucii.
Wakiilka Mkhitaryan ayaa sidoo kale doonaya in Arsenal ay isaga siiso lacag dhan 5-milyan oo Ginni haddii ay doonayaan inay helaan laacibka reer Armenia, taas oo Gunners ay aqbali la’dahay ilaa haatan.